Sylvestar Stallone Wax La,aan Darteed Waxa Uu Xaday Dahabkii Xaaskiisa Waxaanu Qiime Shaah Lagu Cabo Ku Iibiyay Eygiisii Uu Jeclaa Mudo Yar Kadibna Waxa Uu kamid Noqday Dadka Aduunka Ugu Caansan Ee Lacag Badan Haysta. | Berberatoday.com
Sylvestar Stallone Wax La,aan Darteed Waxa Uu Xaday Dahabkii Xaaskiisa Waxaanu Qiime Shaah Lagu Cabo Ku Iibiyay Eygiisii Uu Jeclaa Mudo Yar Kadibna Waxa Uu kamid Noqday Dadka Aduunka Ugu Caansan Ee Lacag Badan Haysta.
Ma Jiro Qof Og Waxa Aad Awoodid Inaad Qabato Adiga Oo Kaliya Ayaa Og
Aad ayuu u shiiday illaaa uu gaaray inuu xado dahabka xaaskiisa oo uu iibsado. Nolosha ayaa aad ugu adkaatay illaa uu waayo meel uu seexdo. Wuxuu seexan jiray goobaha gaadiidka laga raaco ee magaalada New York. Ma awoodin inuu kiro iska bixiyo mana iibsan Karin cunto uu ku noolaado.
Labo todobaad kaddib wuxuu arkay ciyaar feer ah oo u dhaxeysay Mohamed Ali Clay iyo Chuck Wepner halkaas oo uu ka helay dhiirigelin uu ku diyaariyo qoraalka Filinkii caanbaxay ee “ROCKY”
Wuxuu qorayey qoraalka Filinka 20 saacadood si uu u iibsado waxaana loo gaaray qoraalka $125,000 laakiin isagu wuxuu watay hal codsi kaasoo ah in qoraalka Filinka laga iibsado isla Filinkana uu ka noqdo Jilaaga ama ninka Filinku ku socdo. Wuxuu doonayey inuu Actor ama Jilaa ka noqdo ROCKY. Laakiin dadkii doonayey inay Filinka iibsadaan waa ka diideen waxayna doonayeen inuu Filinka Actor ka noqdo Jilaa la yaqaan.
Qoraalkii ayuu qaatay isagoo diiddan in Filinkiisa uu qof kale Jilaa ka noqdo, usbuucyo kaddib Shirkaddii Filinka rabtay ayaa ka siisay qoraalka $250,000 isna waa ka diiday waxay haddana siiyeen $350,000 haddana waa ka diiday. Waxay u sheegeen inay rabaan oo kaliya Filinka inuu ka iibsado laakiin aysan isaga dooneyn inuu Actor ama Jilaa ka noqdo. Wuxuu yiri Maya waa inaan ka mid noqdo dadka ku jira Filinka. Waqti yar kaddib shirkaddii waa ogolaatay waxayna uga iibsatay qoraalka Filinka $35,000 islamarkaana uu Jilaa ka noqdo.
Maanta ninkaas waddooyinka seexan jiray dahabka xaaskiisa ka xaday Eegeygiisana iska iibiyey markii uu waayey wax uu siiyo waa mid ka mid ah Jilaayaasha ugu magaca-dheer adduunka.
Jilaagan dhibaatada adag la kulmay Sylvestar Stallone Ama Rambow isaga oo arintaa ka hadlaya waxuu yiri sidan:
Waxaa Turjumay: Bashiir maxmud